सनातन धर्मले नै मानवकल्याण गर्छः स्वामी स्वरूपानन्द – दैनिक नेपाल न्युज
सिद्धार्थनगर, ५ कात्तिकः भारतको पञ्जाबमा आयोजित गुरु नानकको ५५० औँ जन्मोत्सवका अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित रु १०० को सिक्का र पशुपतिनाथका मूलपुजारी गणेश भट्टले प्रदान गर्नुभएको पशुपतिनाथको चन्दन लिएर सनातन संस्कृति समाजका संरक्षक १००८ स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती त्यसतर्फ जानुहुने भएकोे छ ।
नेपाल सरकारले मुद्रण गरेको रु १०० को सिक्काको एकातिर ‘ॐकार’ र अर्कातिर ‘नेपाल श्रीभवानी’ लेखिएको छ । जनस्तरको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नेपालीको सन्देश लिएर उहाँ त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको उक्त समाजका उपाध्यक्ष धर्मराज बरालले बताउनुभयो ।
बेलहिया नाका हुँदै भारतको पञ्जाबतर्फ प्रस्थान गर्नुभएका स्वरुपानन्दले पत्रकारसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “विश्वमा शान्ति कायम गर्न धर्म अङ्गीकार गर्नुपर्छ । हामी सनातनीहरु सबैको एकताले नै विश्वमा शान्ति र सद्भाव कायम हुन्छ ।”
धर्म जीवनको उन्नतिका लागि आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय धर्मभन्दा धनलाई जोड दिइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसारमा सबै धर्म मनुष्यले बनाएका हुन् तर हिन्दू धर्म, सनातनी भएको र भगवानले नै सिर्जना गर्नुभएको हो । यसको न आदि छ न अन्त्य नै । यो अनादिसम्म चल्छ ।” (रासस)
नेकपा एमालेको दशौँ माहाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णयको स्वागत
न्युयोर्क । एक व्यक्ति अमेरिकी एयरलाइन्सको एउटा विमानको ल्यान्डिङ गियरमा बसेर ग्वोमालाबाट अमेरिकाको मियामी पुगेका छन् । शनिबार मियामीमा विमान अवतरण गरेपछि ती व्यक्ति विमानको ल्यान्डिङ गियरमा फेला परेका थिए [...]
मेष Aries:- प्रशंसकहरू बढ्नेछन् र मानसम्मान समेत पाइनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै वशमा ल्याउन सकिनेछ। सहयोगीहरू जुट्नाले व्यवसायबाट प्रशस्त फाइदा उठाउने मौका छ। वृष Taurus:- आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ। [...]
मूलतः उत्तर दिइएको थियो: के हुन्छ जब एक बजरंग तीर ज्योतिष मा खस्छ? र सुख्खा हल्दी खाडलमा फाल्नु वा बाहिर फाल्नुको फाइदा के हो? माफी संग अनुरोध: कृपया पहिले हिन्दी [...]
मेष Aries:-रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । रमाइलो भेटघाटमा मन रमाउनेछ । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । धेरैले सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनेछन । वृष Taurus:-सानै प्रयाशले काममा सफलता मिल्नेछ । प्रयासहरु [...]
मेष Aries:- विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुट्नाले विशेष अवसर पाइने समय छ। दिगो फाइदा हुने काम शुभारम्भ गर्ने अवसर जुट्नेछ। वृष Taurus:- आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ। खर्च भए [...]
मेष Aries:- आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ। सोचेको आटेको काममा सफलता मिल्नेछ। ब्यापार ब्यबसायबाट प्रसस्त लाभ मिल्नेछ। वृष Taurus:- पढाई लेखाइमा प्रगति हुनेछ। आम्दानीका नयाँ श्रोतहरु फेला पर्नेछन। [...]